Doorashada Sweden & Danaha Soomaalida: Xisbiyada Folkpartiet & kristdemokraterna | Somaliska
Iyadoo doorashada guud ee Sweden ay naga xigto mudo bil ah ayaan barnaamijkaan ku soo qaadan doonaa taariikhda iyo siyaasada xisbiyada Sweden oo kooban. Waxaan xisbiyada ku qiimeyn doonaa siyaasadooda ku aadan arimaha soo galootiga iyo qaasatan danaha Soomaalida.
Maanta waxaan ku soo qaadanaynaa qormadeena xisbiyada kala ah Folkpartiet (Xisbiga shacabka) iyo Kristdemokraterna (Kiristaanka demokraadiga ah). Haddii aan ku bilowno xisbiga Folkpartiet (FP), waxaa is rasmi ah loo aasaasay 5 Augusti 1934. Siyaasada xisbiga Folkpartiet ayaa ah mid ku dhisan waxa loo yaqaan “liberalism” oo ku salaysan xoriyada shaqsiga.
Xisbiga Folkpartiet (FP) ayaa markii ugu horeysay hogaanka u qabtay dowlada Sweden sanadkii 1978 iyadoo uu raysal wasaare ka ahaa Ola Ullsten iyo wasiirka arimaha dibada Hans Blix, balse dowladaas ayaan noqon mid waqti badan Sweden maamulaysay. Iyagoo ka dib xulufo la noqday xisbiga Centerpartiet (C). Sanadki 1991 ayay xulufo la noqdeen xulufo uu hogaaminayay Carl Bildt oo madax ka ahaa xisbiga Moderaterna (M).
Xisbiga Folkpartiet ayaa ah xisbi u dhexeeya midigta iyo bidixda iyadoo codbixiyaashooda ay u badanyihiin dhalinyarada cadaanka ah ee waxbarashada sare gaaray. Sanadihii u dambeeyay ayaa xisbiga Folkpartiet waxay si weyn lugta ugala jireen arimaha soo galootiga, iyadoo wasiirka isdhexgalka iyo wasiirka sinaanshaha ay ka tirsanyihiin xisbigaan. Siyaasada soo galootiga ee xisbiga FP ayaa ah mid u wanaagsan soo galootiga, iyagoo aaminsan in la soo dhaweeyo dadka magangalyo doonka ah oo lala dagaalamo cunsuriyada.
Balse waxay sidoo kale soo bandhigeen arimo dood dhaliyay oo ku saabsan qaabka isdhexgalka loo samaynayo. Horay ayay u soo jeediyeen in dadka doonaya in ay Swedish noqdaan laga qaado imtixaanka luuqada, iyo in Muslimiinta laga hor istaago in ay ku biiraan dagaalada ka socda wadamada kale.
Siyaasada arimaha dibada ee xisbigan Folkpartiet ayaa ah mid si weyn ugu dhow Maraykanka, iyagoo aad u taageera wadanka Israel oo Falastiiniyiinta gumaysiga ku haysa. Folkpartiet ayaa waxaa ka tirsan dhowr Soomaali ah, iyadoo qaarkood ay u sharaxanyihiin baarlamaanka Sweden ee doorashada sanadka 2014. Gudoomiyaha xisbiga FP ayaa lagu magacaabaa Jan Björklund isagoo ah wasiirka waxbarashada Sweden.
Xisbiga Kristdemokraterna (KD) ayaa la aasaasay sanadkii 1964 si ay ugu doodaan arimaha Kiristaanka. Waxay baarlamaanka soo galeen markii ugu horeysay 1991 ka dib wada shaqayn ay la galeen xisbiga Centerpartiet (C) Xisbigaan ayaa ah mid siyaasadiisa ay ku dhisan dhowriga danaha Kiristaanka iyo dadka waaweyn. Waxay ka tirsanyihiin xulufada dowlada (Alliansen) ee uu hogaamiyo xisbiga Moderaterna (M).
Marka laga hadlayo arimaha soo galootiga ayaysan wax badan ka duwanayn xisbiyada kale ee ku jira xulufada dowlada iyagoo aaminsan soo dhaweynta soo galootiga. Balse dhowr isbuuc ka hor ayay ahayd markii ay xubin ka tirsan xisbigaan ay ku dooday in Soomaalida laga ceshado sharciga. Qaar kale oo ka tirsan xisbigaan ayaa muujiyay hadalo cunsuriyad ah oo ku dhow siyaasada xisbiga Sverigedemokraterna (SD).
Doorashadaan ayaa laga cabsi qabaa in xisbigaan uu guud ahaan baarlamaanka ka baxo, iyadoo ay aad hoos ugu dheceen taageerayaashooda. Gudoomiyaha xisbiga Kristdemokraterna (KD) ayaa lagu magacaabaa Göran Hägglund isagoo ah wasiirka arimaha Bulshada.
Ka Muslinka iyo Somalida dani ugu jirto ee aan anshaxa xumayn hala taageero insha Allah. Ilaahayna Kii qabsadaba khayr ha inooga dhigo.
Asc sxb waad mahadsantahay kuwa kalena taariikhdooda oo kooban waan kaa sugaynaa lkn waxan jeclaan lahaa inaad kuso darto fikradaha ay ka qabaan
1. soo galootiga
2. shaqada abuurida iyo canshuur bixinta.
3. waxbarasha iyo caafimaadka
4.Arrimaha dibada iwm.
Mr Warmoog says:
Asc dhamaan su’aal… Qofka imsa sano markuu joogo Sweden ayaa loo ogol yahay inuu codeeyo ? Thanks